မန်ယူအသင်းရဲ့ ဗဟိုခံစစ်မှူးနေရာများကို မဖြစ်မနေ အစားထိုးတော့မယ့်…ဘယ်သူတွေများလဲ…. – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ရာသီအစကတည်းက ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်မူနဲ့အတူ ဗဟိုခံစစ်မှူးနေရာမှာ လက်ရှိကစားသမားတွေရဲ့ ခြေစွမ်းဟာလည်း အားရစရာမရှိခဲ့ပါဘူး…..
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပေးဂိုးများစွာနဲ့ အတူ အမှတ်ပေးစရာရဲ့ အဆင့်(၉) နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ခြင်းရဲ့ တရားခံတွေထဲမှာ ဗဟိုခံစစ်မှူးအားနည်းချက်က အဆိုးဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…
ပရိသတ်များစွာနှင့်အားကစားကျွမ်းကျင်းသူများ ဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်းများက ဗဟိုခံစစ်မှူးနေရာကို ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွေ့မှာ အစားထိုးပါတော့မယ်ဆိုပြီး ယူနိက်တက်နည်းပြ ဆိုးရှားလ် နှင့် အက်ဝုဒ်က ပြောလာပါပြီ….
မန်ယူအသင်းဟာ ဗဟိုခံစစ်မှူး နေရာအတွက် လိုက်ဇက် အသင်းမှ အူပါမီကာနို နဲ့ ရီးရဲနောက်ခံလူ ရာမို့စ်တို့ကို ရရှိဖို့ အေးဂျင့်များထံမှ စတင်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နေခဲ့ပြီဆိုတာကို မန်ယူအသင်းအားကစားဒါရိုက်တာမှ ထုတ်ပြောလာခဲ့ပြန်ပါတယ်…
လက်ရှိသတင်းများကို သုံးသပ်ကြည့်ရတော့မယ် အခြေနေအရဆို ရင်တော့ ရာမို့စ်က ရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ လိုက်ဇက်မှ အူပါမီကာနိုကတော့ ရောက်လာဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို The Sun ကလည်း ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်…